Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- दरबार त काठमाडौंमै छ, सबै सिंहहरू गाउँ–गाउँमा आइसके : मेयर साह
विजय शंकर प्रसाद साह, मेयर, सबैला नगरपालिका, धनुषा
० तपाइँको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष हो, जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?
— करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । यो नयाँ संरचना पनि हो । तर जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउनु जनप्रतिनिधिको काम हो । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई थाहै छैन कि उ केका लागि निर्वाचित भएर आएका छन् । जनतालाई धेरै अपेक्षा र आशा थियो कि स्थानीय निर्वाचनपछि जनतालाई धेरै सुविधा हुनेछ । अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नो कार्यालय पनि छैन । अब हाम्रो कार्यकालको करिब ६ महिना जति समय बाँकी छ तर अहिलेसम्म हामीले चाहिने जति कर्मचारी पनि पाएका छैनौं । यो सबैला नगरपालिका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकापछिको सबभन्दा ठूलो हो । तर आजसम्म हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं ।
० भनेपछि स्थानीय चुनावपछि ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने कुराको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ?
— स्थानीय चुनावपछि ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ भनिएको थियो तर दरबार त काठमाडौंमै छ र सबै सिंहहरु गाउँ–गाउँमा आइसकेका छन् ।
० तपाइँहरु सिंह हुनुहुन्छ ?
— होइन, सिंह बनेका छौं, हाम्रा केही साथीहरु । कतिपय वडाध्यक्ष, उपमेयर, मेयरहरुले आफूलाई राजा ठानेका छन् । जनताले आफ्नो कामका लागि जनप्रतिनिधिसमक्ष जाँदा उहाँहरु भन्नुहुन्छ कि तपाइँले मलाई भोट नै दिनुभएको छैन अनि कसरी काम गर्ने भन्छन् । त्यस्ता मान्छेहरु सबै पालिकाहरुमा छन् । चुनाव जितेर आइसकेपछि कुनै विशेषको नेताको रुपमा मात्र काम गर्नुभएन, सबै जनताका लागि काम गर्नुपर्छ ।
० त्यसो हो भने जनताले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने कुराको अनुभूति गर्न पाएनन् ?
— केही जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारका कारण जनताले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा अनुभूति गर्न पाएनन् । अहिले पनि संघीय सरकारले सम्पूर्ण अधिकारहरु काठमाडौंमै राखेको छ । नाम मात्रको लागि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा गएको छ । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनेको छैन । प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै राख्ने गरेको छ । त्यसलाई ४÷५ महिनामा सरुवा गरिरहन्छ ।
० संघीय र प्रदेश सरकारसँग कतिको सहकार्य हुन्छ ?
— स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्ने भन्ने कुरा कागजमा मात्रै सीमित छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै सरोकार छैन । एउटै योजनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पैसा निकासा भइरहेको हुन्छ ।
० प्रदेश सरकारका योजनाहरु कस्ता छन् ?
— प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम प्रशंसनीय हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाम्रो नगरपालिकामा पनि साइकल वितरण गरिएको छ । तर कार्यक्रम राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो मधेशमा जनचेतनाको धेरै कमी छ । अहिले पनि ग्रामीण भेगमा कतिपयले आफ्ना छोराछोरीको बालविवाह गरिरहेका छन् । बालविवाह सबभन्दा ठूलो समस्या हो ।
० तपाइँले आफ्नो कार्यकालमा स्मरणीय के–कस्ता कामहरु गर्नुभएको छ ?
— हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै सुधार गरेका छौं । बाटोघाटोको अवस्था धेरै राम्रो भइसकेको छ । एक दिनमा न त अमेरिका बनेको छ न त हिस्दूस्तान बनेको छ । बन्नका लागि धेरै समय लाग्छ । हामी यो प्रयासमा छौं कि एउटा आधार निर्माण गरेका छौं । यसपछि जो पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा आउँछन्, उसले यही कामहरुलाई निरन्तरता दिइयो भने विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ । हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण रहेको छ । हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आउँदा केही पनि पूर्वाधार थिएन । हामीले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर आगामी दिनमा यदि जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
० आगामी चुनावमा तपाइँको के योजना छ ?
— अब आगामी दिनमा मैले के गर्ने भन्दा पनि पार्टीले कुन जिम्मेवारी दिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि हामी आफ्नो इच्छाले केही गर्न सक्दैनौं । यदि पार्टीले प्रदेश वा संघमा पठाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्छु, होइन पालिकामै बस्नुस् भन्छ, त्यो पनि स्वीकार्य छ ।
० तपाइँ यदि फेरि सबैलाको मेयरमै चुनाव लड्नुभयो भने जनताले विश्वास गर्छ ?
— यदि पार्टीले मलाई फेरि मेयरकै लागि पठायो भने पहिलेभन्दा राम्रो अवस्था हुन्छ । अहिले यो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको एउटा मेयर र दुईवटा वडाअध्यक्ष मात्रै छन् । यहाँ जम्मा १३ वटा वडा छन् । तर आउने समयमा कांग्रेसले यस पालिकामा ८/९ वटा वडामा जित्छ, मेयर, उपमेयर पनि जित्छ । म यो कार्यकालभित्र कांग्रेसको लागि बलियो जनाधार तयार भइसकेको छ ।
सिंहदरबार गाउँमा होइन, जनता राज स्थापित गर्छौं
काम गर्न सकिएन भने राजीनामा माग्नुस्